Ivory Coast: Kubadda Koleyga Qaranka waxay halis ugu jiraan inay qaadacaan Koobka Adduunka - JeuneAfrique.com -
ACCUEIL » COMPANY Ivory Coast: Kooxda kubbadda Koleyga Qaranka waxay halis ugu jiraan inay qaadacaan Koobka Adduunka - JeuneAfrique.com
Ivory Coast: Kooxda kubbadda Koleyga Qaranka waxay halis ugu jiraan inay qaadacaan Koobka Adduunka - JeuneAfrique.com
Laba toddobaad ka hor Koobka Kubadda Koleyga Adduunka, ciyaartoy ka socda xulka qaranka Ivory Coast ayaa ku hanjabaya inaysan u safrin Shiinaha, halkaas oo lagu qaban doono 31 August. Ku lug leh: gunooyin dhowr kun euro ah oo aan la siin ciyaartoydii. Wasiirka Ciyaaraha ayaa balan qaaday in wax walba ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo laabto nidaamka.
Ciyaartoyda kooxdii kubbadda koleyga qaranku way soo noqdeen. Ragga macallinka reer Talyaani Davide Povia, ee xilligan ku sugan diyaargarowga Vicenza ee waqooyiga Talyaaniga, ayaan wali helin gunnooyinka xulashada ee loo ballan qaaday. Ciyaartoyda ciyaaraha fudud ayaa ku hanjabay inaysan geli doonin 18 August ee Shiinaha, halkaas oo ay ka bilaabmi doonto laba toddobaad ka dib ragga Kubadda Koleyga Koobka Adduunka.
Safarka Mareykanka ee La Joogay
Markii hore, ciyaartoydu waxaa looga baahnaa inay helaan gunooyin dheeri ah oo ah 3 500 euro (oo lagu daro kaalmadooda xulasho ah) iyada oo loo marayo socdaal ay ku tagayaan Orlando, USA, halkaas oo kulammo diyaarin ah looga hor tago kooxaha maxalliga ah.
Xiriirka Kubadda Koleyga ee reer Ivory Coast wuxuu heshiis la galay Kings Law, shirkad Mareykan ah oo uu madax ka yahay Jean-Francois Bro Grégbé, oo horey u ahaan jiray cayaaryahan Kubadda Koleyga u beddelay ganacsi. Laakiin dhaqaale la’aanta safarka soo laabashada (qarash gareynta xiriirka), xulka qaranka ayaa ugu dambeyntii u dejiyay koorsada ay ku tababari doonaan Talyaaniga.
“Tan iyo markii naloo doortay, maanaan helin wax gunno ah. Shuruudaha diyaarinta ayaa loo fulin karaa xirfadlayaasha aan nahay, nafteenana waa looga tagay. Tusaale ahaan, wax daryeel caafimaad ah oo la qorsheeyay ma jiro, ”ayuu yiri ciyaartoy Dhallinyarada Afrika. Ishaani waxay sidoo kale sheeganeysaa in abaalmarinta xulashooyinka Euro ee 7 000 loo ballan qaaday iyaga, ka hor inta aan ugu dambeyntii loo dhimeynin 3 000 euro. Laakiin dukumenti ama heshiis qoraal ah ma caddayn karaan.
Ilaa iyo markaa, ciyaartoydu waxay heleen lacago aan habooneyn oo ka yar 1 000 euro oo waxaan kor ugu qaadnay 3 000, ayuu yiri Wasiirka Ciyaaraha.
"Ma jiro heshiis qoraal ah oo xaqiijinaya lacagta" 7 000 euro ". Ma jiraan wax dhib ah oo la xiriira gunnooyinka, ciyaartoydu waxay heleen illaa hadda xaddi lacageed oo ka yar 1 000 euro waxaanan ugu kordhinay 3 000 ", ayuu ku dooday Paulin Danho, Wasiirka Isboortiga, inuu la xiriiray Dhallinyarada Afrika.
Una sharax: “Diyaarinta Talyaaniga, xiriirka wuxuu qorsheeyay, Malaga, Spain, ciyaaro aan la qorsheynin. Markaa waxay ahayd inaan u isticmaalno lacagta gunnada ah sidii aan u maalgelin lahayn safarkan. Wakiilka khasnadda Ivory Coast ee raacsan kooxda waxay ahayd inuu si degdeg ah ugu laabto Abidjan si uu lacag uga raadsado. "
Dhamaan gunooyinka waa la bixin doonaa ”
Mas'uuliyiinta Ivory Coast si adag ayey xaaladda u qaadanayaan, dhegeysuna way dhegeysatey su’aasha khuraafaadka. “Wakiilka maaliyaddu wuxuu ka soo noqdaa Abidjan Arbacada ama Khamiista. Marku soo laabto, ayaa la bixin doonaa khidmadaha oo dhan, ayuu yidhi wasiirku.
Côte d'Ivoire dhexdeeda, fadeexadaha abaalmarinta isboortiga inta badan waa ay ka baxaan marka tartamada caalamiga ahi soo dhowaadaan. Xiriirrada federaalku, waagii hore, waxaa horey loogu eedeeyey inay la wareegeen lacagihii cayaaraha. Haddii khidmada xulashada 3 Euro dhab ahaantii la siiyo ciyaartoydan, Maroodiyayaashu waxay ballan qaadayaan inay u safraan Shiinaha si ay ugu tartamaan Koobka Adduunka. Kadibna waxay ku soo baxayaan Group A, oo ay weheliyaan Poland, Venezuela iyo China.
Maali: Caruurta 150 ayaa la diley ilaa bilowgii sanadka iyo ku dhawaad ​​400 000 oo qatar ku jirta - JeuneAfrique.com
Waxyaabaha Qarxa Markabka Miinada Ayaa Xusuusatay 82 - JeuneAfrique.com
PHOTOS. Sawirka qoyska: Charlotte Gainsbourg iyo Yvan Attal waxay ku faani jireen in wiilkooda Ben ay la soo baxeen
Hindiya: BJP waxay qorsheyneysaa Ololaha Maqaalka 370 Qormada waxayna ku soo biiri doontaa 2 000 Shakhsiyadeed | Wararka Hindiya
Gamescom 2019: Gylt, Google Stadia oo gaar ah ayaa iskiis u muujisa ciyaarta ciyaarta
Waxaan dib u celinay adduunka '21 August' 2019 - VIDEO
DADKA & LIFESTYLE3,163
TECH & TELECOM1,571
Video dheeraad ah1,333